Sony dia manivana amin'ny fomba diso ny famaritana ny Xperia Z5 Androidsis
Sony diso mamoaka ny famaritana ny Xperia Z5
Efa amin'ny faran'ny volana aogositra isika izao ary eo an-joron-tsoloky ny fampirantiana teknolojia lehibe farany amin'ny taona, ny IFA any Berlin. Araka ny efa fantatrao ankehitriny, orinasa maro no mikasa ny hanolotra zava-baovao maro izay hivoaka alohan'ny faran'ny taona na amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Sony dia iray amin'ireo orinasa hanolotra fitaovana marobe mandritra ny fankalazana IFA 2015. Iray amin'ireo fitaovana ireo ny smartphone vaovao Xperia Z5 Compact izay efa noresahintsika tamin'ny fotoana tao amin'ny bilaogy. Ankehitriny dia manana vaovao misimisy kokoa momba an'io finday finday io izahay satria, Sony dia namoaka ny antsipirihany sy ny antsipirihany amin'ny sainam-bolony vaovao, ny Sony Xperia Z5, ho fanampin'ny kinova Xperia Plus.
Efa fantatsika fa ny famoahana dia manapotika ny wow factor an'ny orinasa iray rehefa te-hanolotra zavatra amin'ny vahoaka izy ireo. Ny sasany amin'ireo famoahana ireo dia fanahy iniana ary ny sasany kosa mazoto ataon'ireo mpanamboatra azy ireo. Ny famoahana farany momba ny fantsona vaovao an'ny orinasa Japoney, dia nangonin'ny bilaogin'i Georgia natokana ho an'i Sony ary avy eo hita tao amin'ny mombamomba an'i @evleaks.
Sarona ilay Xperia Z5 vaovao
Eny, hanolotra fitaovana maromaro ny orinasa Japoney 2 septambra ho avy izao, araka ny nohamafisin'ireo mombamomba azy ireo tao amin'ireo tambajotra sosialy lehibe. Anisan'ireo fitaovana ireo ny Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Plus ary ny Xperia Z5. Araka ny hitanao dia ity no ho fitaovana isan-karazany vaovao mifototra amin'ny sainan'ny orinasa vaovao. Ka 7 andro mialoha ny fampisehoana amin'ny fomba ofisialy ireo terminal ireo dia azontsika atao ny manamarina ny toetrany.
Miomàna ho an'ny smartphone iray izay mifantoka bebe kokoa. Ho mazava ny zava-drehetra amin'ny 02.09.2015. pic.twitter.com/Mm7HjWKojA
- Sony Xperia GB (@sonyxperiagb) Aogositra 24, 2015
Ny kely indrindra amin'izy ireo, ny Xperia Z5 Compact, izay efa voasivana araka ny efa nomarihinay teo aloha, dia hanana Efijery 4,6 inch eo ambanin'ny vahaolana amin'ny efijery 720p. Manaraka azy ny sainam-pirenena vaovao, ny Xperia Z5, izay hampiditra a Efijery 5,2 inch ary miaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny 1080 p. Ary farany, ny kinova lehibe indrindra, ny Xperia Z5 Plus, dia ho feno a Efijery 5,5 inch ambanin'ny fanapahan-kevitry ny 2160p.
Anisan'ny angon-drakitra manan-danja hafa, ny terminal rehetra dia hanana famolavolana sy mpamaky ny dian-tànana. Voalaza fa ny azy fakan-tsary dia ho 23 Megapixels miaraka amin'ny fifantohana hybrid ao amin'ny 0.1 segondra, aperture f / 1.8, fanamafisana, sensor 1 / 2.2 ary vaovao maro hafa ao amin'ny fizarana sary.
Tsy dia misy sisa tavela ho an'ny fankalazana IFA any Berlin hahitana ny zava-drehetra momba ireo terminal Sony vaovao ireo. Ho eo amin'ity hetsika ity izahay, amin'izay ianao afaka manana fanaraha-maso mivantana, na amin'ny bilaogy na amin'ny fantsona YouTube anay, koa miambena hatrany mandritra ny andro vitsivitsy mba haharaka ny vaovao momba ny teknolojia rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony diso mamoaka ny famaritana ny Xperia Z5
PRO SONY dia hoy izy:
Mpiara-miasa ... TSY NAMPIASA AZY I SONY. Ny kaonty 'Sony Georgia' ao amin'ny Face Book dia TSY MANARAKA. Averinay indray: TSY ny kaonty ofisialy izany.
Valiny amin'i SONY Pro
Avereno jerena ny Doogee Nova Y 100X, Lollipop Quad Core latsaky ny 80 Euros
Ny Moto 360 2015 dia azo jerena amin'ny sary